၀ င်ရန်လိုအပ်ရန် WordPress ရှိစာမျက်နှာများကိုကန့်သတ်ပါ Martech Zone
Login ပြုလုပ်ရန်လိုအပ်သည်ကို WordPress ရှိစာမျက်နှာများကိုကန့်သတ်ပါ
တနင်္လာနေ့, စက်တင်ဘာလ 28, 2009 သောကြာနေ့, အောက်တိုဘာလ 11, 2013 Douglas Karr
ယခုသီတင်းပတ်တွင်ကျွန်ုပ်တို့သည် ၀ က်ဘ်ဆိုက်တစ်ခုတွင်စိတ်ကြိုက်အခင်းအကျင်းတစ်ခုကိုအကောင်အထည်ဖော်ရန်ပြီးဆုံးသွားပြီးအချို့သောစာမျက်နှာများသည်မှတ်ပုံတင်ထားသောစာရင်းပေးသွင်းထားသူများအတွက်ကန့်သတ်ထားသောအပြန်အလှန်ဆက်သွယ်မှုမျိုးတည်ဆောက်ရန်တောင်းဆိုခဲ့သည်။ ပထမတော့ third party plugins တွေကိုအကောင်အထည်ဖော်ဖို့ကျွန်တော်တို့စဉ်းစားခဲ့ပေမဲ့အဖြေကတကယ်တော့တော်တော်လေးကိုရိုးရှင်းပါတယ်။
ပထမ ဦး စွာကျွန်ုပ်တို့သည်စာမျက်နှာ template ကိုဖိုင်အသစ်တစ်ခုသို့ကူးယူခဲ့သည် (မည်သည့်နာမည်ကမှကောင်းမည်၊ php extension ကိုသာထိန်းသိမ်းရန်) ။ စာမျက်နှာ၏ထိပ်ဆုံးတွင်စာမျက်နှာတည်းဖြတ်သူမှအမည်ဖြင့်မြင်နိုင်ရန်စာမျက်နှာပေါ်တွင်မှတ်ချက်ပေးပါ။
အကြောင်းအရာကိုဖော်ပြသည့်သင်၏စာမျက်နှာကုဒ်ရှိလိုင်းကိုရှာဖွေပါ။ အောက်ပါအတိုင်းမြင်ရမည် -
ယခုသင်သည်၎င်းမျဉ်းပတ်ပတ်လည်ရှိ code အချို့ကိုခြုံရန်လိုအပ်သည်။
စာရင်းသွင်းသူသာ စိတ်မကောင်းပါ။ သင်ရောက်ရှိရန်ကြိုးစားနေသောအကြောင်းအရာသည်သုံးစွဲသူများကိုသာကန့်သတ်ထားသည်။
အသုံးပြုသူသည်သင်၏ WordPress ဆိုက်ထဲသို့ဝင်ရောက်မဝင်စစ်ဆေးရန်ထိုကုဒ်သည် session ကိုစစ်ဆေးခြင်းဖြင့်စတင်သည်။ သူတို့ log in လုပ်ထားလျှင် content ကိုပြလိမ့်မည်။ အကယ်၍ ၎င်းတို့သည် log in မ ၀ င်ပါကသင်ကန့်သတ်ထားသောအကြောင်းအရာများကိုရောက်ရှိရန်ကြိုးစားနေသည်ဟုသတင်းကဖော်ပြသည်။
စာမျက်နှာကိုအသုံးပြုရန်သင်ရွေးရန်လိုအပ်သည် စာရင်းသွင်းသူများသာ သင့်စာမျက်နှာ၏ရွေးစရာများအပိုင်း (sidebar တွင်) တွင်ရှိသည့် page template ။ ၎င်းသည် log in ၀ င်သောစာဖတ်သူများအတွက် page ကိုကန့်သတ်လိမ့်မည်။
အကယ်၍ သင်အမှန်တကယ်ဖန်စီလိုလျှင်, သင်သည်သင်၏ sidebar သို့လည်း login နှင့် logout နည်းလမ်းကိုထည့်နိုင်သည်။
Tags: အုပ်ချုပ်သူစာရေးသူအယ်ဒီတာအတွက် loggedlogged_inစာရင်းပေးသွင်းထားသူအကြောင်းအရာWordPress
Newsflash - နည်းဗျူဟာကအရေးကြီးနေတုန်းပဲ
စက်တင်ဘာ 29, 2009 မှာ 4: 13 AM
Nice post ... ဒီမြင်ကွင်းမှာရွေးစရာမရရှိနိုင်ဘူးလို့ကျွန်တော်အံ့သြမိတယ်။
29:2009 pm တွင်စက်တင်ဘာ 12, 45 မှာ
29:2009 pm တွင်စက်တင်ဘာ 1, 33 မှာ
အသုံးဝင်သော post ကို, ဒီ။ ဒီစာမျက်နှာကိုတင်တယ် ငါမေးခွန်းတစ်ခုရှိတယ်။
သင် you ည့်သည်အားလုံးအားဘလော့ဂ်စာမျက်နှာ၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းကိုပြသလိုလျှင်၎င်းမှာအားလုံးသည်စာရင်းပေးသွင်းထားသူများကိုသာဖော်ပြလိုလျှင်မည်သို့ဖြစ်မည်နည်း။
29:2009 pm တွင်စက်တင်ဘာ 1, 50 မှာ
၎င်းသည်ရိုးရှင်းပါသည်။ သင်သည်တူညီသောနည်းစနစ်ကိုစာမျက်နှာ၏ခေါင်းစဉ်သို့ပေါင်းထည့်ပြီးအခြေခံအားဖြင့်ပြောပါက (လျှင် (အသုံးပြုသူနှင့်စာမျက်နှာမရှိသောစာမျက်နှာမှာ pagename နှင့်မတူပါ) ထို့နောက် login စာမျက်နှာသို့ရှေ့သို့ ဦး တည်နိုင်သည်။
16:2010 pm တွင်ဇူလိုင်လ 4, 24
ကြီးမြတ်ကြော့ဖြေရှင်းချက်! ငါလိုအပ်တာကပြင်ပ login system တစ်ခုတည်ဆောက်ဖို့အလေးအနက်စဉ်းစားခဲ့တယ်။
21:2011 pm မှာဖေဖော်ဝါရီ 1, 04
ဤသည်မှာသင်ယူနေသောလူများအတွက်အသုံးပြုရန်လွယ်ကူခြင်းမဟုတ်ပါ။ အားလုံးအသုံးပြုသူဖော်ရွေမဟုတ် !!!!
30:2011 pm မှာအောက်တိုဘာ 12, 04
ကျိန်းသေလေ့လာသူအဘို့ဤစိတ်ထဲမရေးခဲ့ပါဘူး။ ဝမ်းနည်းပါတယ် Devs_mum!
16:2012 pm တွင်ဇန်နဝါရီလ 10, 14
၎င်းသည်အသုံးပြုသူအတွက်အဆင်မပြေသော်လည်း၎င်းသည်အဆင်ပြေပါသည်။ ကျွန်ုပ်လုပ်နေသည့်ပုံ၏အချို့သောပုံများကကူညီလိမ့်မည်။ ဒီလိုမှမဟုတ်ရင် ... ငါအလုပ်လုပ်တယ်မှီတိုင်အောင်ပစ္စည်းများကိုကြိုးစားသွားမယ်!
11:2013 pm မှာအောက်တိုဘာ 1, 40
page.php ကိုကူးယူပါ၊ page2.php ကိုနာမည်ပြောင်းပါ၊ အထက်ကကုဒ်ကိုထည့်ပါ၊ ဖိုင်ကိုသိမ်းပါ၊ အကြောင်းအရာ / အခင်းအကျင်း / ပြန်လာပြီသို့ပြန်ပို့ပါ၊ စာမျက်နှာသို့သွားရန်သို့မဟုတ်စာမျက်နှာမျက်နှာပြင်ပြောင်းလဲမှုစာမျက်နှာစာမျက်နှာစာမျက်နှာအားဖြင့်ပြောင်းရန်။ စာမျက်နှာစတိုင် / အပြင်အဆင်အသစ်တစ်ခုကိုသင်ဖန်တီးရန်မလိုအပ်ပါ။ သင်အသုံးပြုသောပုံစံကိုကူးယူပြီးအမည်ပြောင်းပါ။ fullwidth.php သည် fullwidth2.php ဖြစ်သည်။
16:2012 pm တွင်ဇန်နဝါရီလ 11, 57
တော်တော်များများကြိုးစားပြီးအင်တာနက်ပေါ်မှအခြားသင်ခန်းစာများကိုကြည့်ပြီးတဲ့အခါ…စာမျက်နှာအသစ်တစ်ခုပြုလုပ်ခြင်းသည်ကျွန်ုပ်၏ပြissueနာဖြစ်သည်။ ငါစာသားအယ်ဒီတာအတွက်တ ဦး တည်းလုပ်။ အဘယ်မှာရှိ upload တင်ရန်ကြိုးစား? ဘယ်ကိုသွားရမှန်းတောင်မသိဘူး ကျွန်ုပ်တင်ပို့ရန်ဒီလျှို့ဝှက်နေရာကိုမရှာဖွေနိုင်ပါ။
ဇန်နဝါရီ 17, 2012 မှာ 12: 27 AM
ဒီတော့စစ်မှန်တဲ့ LaRocque! FTP ပရိုဂရမ်တစ်ခုရှိပြီးသင့် ၀ က်ဘ်ဆိုဒ်၏ဆောင်ပုဒ်ဖိုင်တွဲကိုရယူရန်လိုအပ်သည်။ အုပ်ချုပ်ရေးမျက်နှာပြင်မှတဆင့်လုပ်ရန်လက်ရှိအချိန်တွင် NO နည်းလမ်းမရှိပါ ချွင်းချက်တစ်ခုမှာဖိုင်အသစ်များပြုလုပ်ရန်ခွင့်ပြုထားသော“ File Manager” plugin ကိုထည့်သွင်းခြင်းဖြစ်သည်။ သို့သော်သတိထားပါ။
3:2011 pm တွင်သြဂုတ်လ 1, 14
30:2011 pm မှာအောက်တိုဘာ 12, 03
အသုံးပြုသူတစ် ဦး ၀ င်ရောက်ခြင်းရှိမရှိစစ်ဆေးရန်သင်သေချာစွာလုပ်နိုင်သည်။ သို့သော်အထက်တွင်ဖော်ပြထားသောနည်းလမ်းသည်နောက်ဆုံးတွင်သင်အဆင့်များကိုစိတ်ကြိုက်ပြုလုပ်လိုပါကခွင့်ပြုချက်အဆင့်ကိုအသုံးပြုခွင့်ပြုလိမ့်မည်။
ဇန်နဝါရီ 25, 2012 မှာ 6: 47 AM
ဆိုကြပါစို့ - ကျွန်ုပ်တို့သည်မည်သူမဆိုသူတို့၏ကိုယ်ပိုင်“ Subscriber” အသုံးပြုသူအမည်ကိုဖန်တီးခွင့်နှင့်တုန့်ပြန်ချက်များကိုတင်လိုကြသည်။
သို့သော် -“ စာရင်းသွင်းသူများသာ” စာမျက်နှာကို admin မှသတ်မှတ်ထားသောအသုံးပြုသူများကိုသာခွင့်ပြုမည်လား။
23:2012 pm မှာဖေဖော်ဝါရီ 12, 22
မတ်လ 9, 2012 မှာ 1: 49 pm တွင်
ဒေါက်ဂလပ် - ငါမင်းရဲ့ကုဒ်ကိုသုံးခဲ့တယ်။ အများစုအတွက်အဆင်ပြေတယ်။ ကျွန်ုပ်၌ရှိသောပြissueနာမှာ Logout link သည်တည်ရှိမှုမရှိသော site သို့ပြန်သွားခြင်းဖြစ်သည်။ အမှန်တကယ်အားဖြင့် log out သည်ကုဒ်များကိုအလုပ်ပြီးအောင်လုပ်ရန်ကျွန်ုပ်သည်ဝက်ဘ်တစ်ခွင်မှ wordpress ကုဒ်များစွာကိုကြိုးစားခဲ့သည်။ ။ ။ သို့သော်အသုံးပြုသူသည် log in ဝင်နေဆဲနှင့်ပြန်သည်//wp-login.php?redirect_to=•>log%20in%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20ဖြစ်သည် % 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20
မတ်လ 9, 2012 မှာ 3: 27 pm တွင်
သင့် browser မှ code ကိုကူးယူသောအခါ Ryan နေရာပေါင်းများစွာထည့်ထားသည့်ပုံရသည်။ Code ကို Notepad (သို့) Textpad ထဲသို့ကူးယူပြီး၎င်းကိုဖယ်ရှားရန်သင့် template သို့ copy ကူးပါ။
မေလ 1, 2013 မှာ 3: 44 pm တွင်
အိုကေဒါဒါကငါလုပ်ဖို့လိုအပ်တဲ့အရာပဲ။ ဒါပေမယ့်ငါမှာမေးခွန်းတစ်ခုရှိတယ်။ အကယ်၍ ၎င်းတို့သည်စာရင်းပေးသွင်းသူမဟုတ်ပါကပါဝင်သည့်အကြောင်းအရာများကိုကြည့်ရှုနိုင်ရန်အတွက်“ ၀ င်ရောက်ရန်” (သို့)“ စာရင်းပေးသွင်းရန်” အကွက်ပေါ်လာအောင်ကျွန်ုပ်မည်သို့လုပ်နိုင်သနည်း။
မေလ 1, 2013 မှာ 11: 14 pm တွင်
အထက်တွင်ဖော်ပြထားသော“ တောင်းပန်ပါတယ်…” ရှိသည့်အခြားကြေငြာချက်ပြီးနောက်သင်ချိတ်ဆက်နိုင်သည်။
11:2013 pm မှာအောက်တိုဘာ 1, 44
ကုဒ်အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ လူတွေကငါ့ကိုစိတ်ဆိုးအောင်လုပ်လိမ့်မယ်။ ဒါပေမယ့်လူတိုင်းကဖိုင်တွေကိုလွယ်လွယ်ကူကူရှာတွေ့ဖို့လူတိုင်းကိုခွင့်မပြုစေချင်တဲ့အရာတစ်ခုခုလိုချင်ရင် login လုပ်မယ်လို့ထင်ကြတယ်။
31:2014 pm တွင်ဇန်နဝါရီလ 11, 43
ဤနည်းလမ်းသည် session ပြန်ပေးဆွဲခြင်းခံနေရသောအသံဖြစ်သည်။ login cookie ကိုလုံခြုံစိတ်ချရသောနေရာတွင်ထည့်သွင်းလိမ့်မည်ဖြစ်သော်လည်း wordpress က၎င်းကိုလုံခြုံမှုမရှိသော cookie အဖြစ်အသုံးပြုသောကြောင့်အသုံးပြုသူသည် encrypt မထားသော site ၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုသို့ပြန်သွားပါကအလုပ်မလုပ်တော့ပါ။
1:2014 pm မှာဖေဖော်ဝါရီ 1, 35
၎င်းသည် hack မဟုတ်ပါ၊ ၎င်းသည် WordPress API လုပ်ဆောင်ချက်များကိုအသုံးပြုသည်။ မည်သည့်လုံခြုံရေးကိုမှကျော်လွှားနိုင်ခြင်းမရှိသလို session သို့မဟုတ် cookie ကိုတိုက်ရိုက်ဝင်ရောက်ခြင်းမရှိပါ။
ဧပြီ 12, 2015 မှာ 4: 25 pm တွင်
အသုံးပြုသူတစ် ဦး ဖြစ်လျှင် div container ကိုလုပ်ရန် if statement ကို သုံး၍ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်